Myanmar Muslims' Voice (MMV) | မြန်မာမွတ်စလင်တို့၏ အသံ
European Parliament condemns recent crimes and widespread discrimination against albinos in Malawi, ongoing restrictions of fundamental democratic rights in Bahrain and practices that discriminate against Myanmar’s Muslim minority, in particular the More »
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၆) ရက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အားအပြတ်သားဆုံး ဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးခဲ့သည့် နှစ်လေးဆယ်ပြည့်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီရေးသို့ အသွင်းကူးပြောင်းနေပြီ ဟူ၍ လူထုအတော်များများက ထင်မှတ်မှားနေကြချိန် ဤနှစ် ဤလအတွင်းမှာပင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အခိုင်အမာရှိနေသေးကြောင်း ထင်ရှားသည့် သာဓက တခုကို အမှတ်မထင် တွေ့ မြင်လိုက်ကြရသည်။ More »
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုင်ဂျာယန်မြို့ တွင် တည်ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ အကယ်ဒမီတွင် ဥပဒေ အလုပ်သင် (Law Internship) အနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပို့ ချရသည့် ရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ (၁) ဖက်ဒရယ်ရေးရာ လှုပ်ရှားမှုအား ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးလျှက် စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပေါ်ထွန်းလာရေး၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ဖွဲ More »
DVB မြန်မာပိုင်း သတင်းအား တဆင့်ပြန်လည် ဖော်ပြသည်။ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ရွှေဂွန်းကျေးရွာရှိ ဗလီနဲ့ ကပ်လျက်နေရာမှာ မနေ့ညနေက စေတီတဆူကို နာရီပိုင်းအတွင်း အပြီးအစီး တည်ခဲ့တယ်လို့ ရွှေဂွန်းကျေးရွာသားတွေက ပြောပြပါတယ်။ ဒီစေတီတည်တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်ဦးစီးပြီး လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ကွမ်းတောကျေးရွာက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း စေတီတည်ခဲ့အပြီး တပတ်အတွင်း ဗလီနဘေးမှာ ထပ်မံစေတီတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗလီနဘေးမှာ More »
International Press Institute Ko Par Gyi shot in 2014 while in military custody Myanmar must not allow the case ofajournalist killed in 2014 while in military custody More »
ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခ အဆုံးသတ်ရေး အီရန်နှင့် တူရကီ လက်တွဲမည်
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ (၃၁) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ စတင်
အယ်လ်ဂျာဇီယာ သတင်းဌာနမှ ရိုဟင်ဂျာအရေး “Genocide Agenda” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်ဖော်တင်ဆက်
UNESCO မှ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ နေရာဒေသအချို့အား ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များစာရင်း ထည့်သွင်း
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း – တရုတ်မွတ်စလင် အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဘဝနဲ့ အခြေအနေ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာ အလျင်အမြန် တိုးတက်အောင်မြင်မှု ရရှိနေတဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာတော် (ပထမပိုင်း)
အမေရိကန်မှာ တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟာမက်သခင်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အခန်းဆက် တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်မည်
ဒုက္ခသည် အများဆုံး လက်ခံထားသော နိုင်ငံ ဘယ်နိုင်ငံများပါနည်း?
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရောက်သူများ မဖြစ်မနေ သွားရောက်လည်ပတ် ဝတ်ပြုလေ့လာသင့်သော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီး (၅) ကျောင်း
အဆင့်မြင့်နည်းပညာကဏ္ဌနှင့် အနာဂတ် တောက်ပသော မလေးရှားနိုင်ငံ
တောင်ကုတ်၌ မွတ်စလင် (၁၀) ဦး သတ်ဖြတ်မှု ရခိုင် (၇) ဦးကို အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှု ပုဒ်မ (၃၂၅) နှင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
အမျိုးသမီးများ ပညာသင်ကြားခွင့် အသက်စွန့် တိုက်ပွဲဝင်သူ သတ္တိခဲ ပါကစ္စတန်သူလေး “မာလာလာ”
© 2018 Myanmar Muslims' Voice (MMV). All Rights Reserved. The MMV is not responsible for the contents of external sites.